ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: October 2009
ကြယ်ပြာရဲ့ “က” စကားလုံးလေးတွေ
မောင်လေးဗညားရှိန်တဂ်ထားတဲ့ ပို့စ်လေး အကြွေးဆပ်လိုက်ပါတယ် ...
နာမည်က ။ ။ ကြယ်ပြာ
ပြောချင်တဲ့စကားလေး လေးလုံးက ။ ။ ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်
ကောင်လေးနာမည်က ။ ။ ကင်းကောင်
ကောင်မလေးကတော့ ။ ။ ကြိုးကြာ
လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က ။ ။ ကွန်ပျူတာပညာရှင်
အရောင်ထဲမှာတော့ ။ ။ ကော်ဖီရောင်
ဘာဝတ်ထားလဲဆိုတော့ ။ ။ ကချင်ထမီ
ဘာအစားအစာကြိုက်လဲဆိုရင် ။ ။ ကော်ပြန့်စိမ်း
ရေချိုးခန်းထဲတွေ့တာ ။ ။ ကြွေဘေစင်
နေရာက ။ ။ ကျောက်ပန်းတောင်း
ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲဆိုတော့ ။ ။ ကားပျက်နေလို့
အော်ချင်နေတာက ။ ။ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ဘူး
ဇတ်ကားထဲမှာတော့ ။ ။ ကောင်းချစ်တဲ့မမ
ဘာသောက်ချင်လဲဆိုတော့ ။ ။ ကျောက်ကျော
တီးဝိုင်းနံမည်က ။ ။ ကွန်းစ် (Corns)
တိရစ္ဆာန်နံမည်က ။ ။ ကျား
လမ်းနံမည်ကတော့ ။ ။ ကန်ပတ်လမ်း
ကားက ။ ။ ကားဒီလက်
သီချင်းလေးထဲမှာ ........ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်(အငဲ)
ကြိယာထဲမှာတော့ . . . . . .ကင်သည် (Roast)
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:43 AM 11 comments Links to this post
အသာအယာနဲ့ပဲ နင်ဟာ ငါ့ရင်ထဲ အလိုလိုရောက်ခဲ့တယ် ….
ငါ ဒီကဗျာထဲကနေပဲ ကတိပေးပါတယ် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:13 AM 11 comments Links to this post